I-DL-Panthenol iyi-Pro-vitamin ye-D-Pantothenic acid (I-Vitamin B5) yokusetshenziswa emikhiqizweni yokunakekelwa kwezinwele, isikhumba kanye nezinzipho. I-DL-Panthenol iyingxube ye-racemic ye-D-Panthenol ne-L-Panthenol.DL Panthenol, iyisilungisi sezinwele esaziwayo esibuyisela ukucwebezela nokucwebezela ezinweleni ezibuthuntu kuyilapho futhi sithuthukisa amandla aqinile. Ukwengeza, i-DL-Panthenol iyi-ejenti yokulungisa isikhumba & ne-moisturizer esebenzayo.
I-D-Panthenol iwuketshezi olucacile oluncibilika emanzini, i-methanol, ne-ethanol. Inephunga eliyisici kanye nokunambitheka okubabayo kancane. I-D-Panthenol ingumthombo kavithamini B5 futhi isetshenziswa njengesengezo sokudla okunempilo kanye nesengezo.
I-D-Panthenol iyisithako esisebenzayo sokunakekelwa kwesikhumba kwezimonyo okuyinkimbinkimbi nemikhiqizo yokunakekelwa kwezinwele. Ithuthukisa ukubukeka kwesikhumba, izinwele nezinzipho. Ihlinzeka ngomswakama kanye nezinzuzo zokulwa nokuvuvukala esikhumbeni futhi ithuthukise ukukhanya, ivimbele ukulimala futhi ithambisa izinwele.
I-D-Calcium Pantothenate ingusawoti we-calcium kavithamini B5 oncibilika emanzini, otholakala yonke indawo ezitshalweni nasezicutshini zezilwane ezinempahla yokulwa ne-antioxidant. I-Pentothenate iyingxenye ye-Coenzyme A kanye nengxenye ye-Vitamin B2 complex.I-Vitamin B5 iyisici sokukhula futhi ibalulekile emisebenzini ehlukahlukene ye-metabolic, okuhlanganisa ukugaywa kwama-carbohydrate, amaprotheni, nama-fatty acids. Le vithamini ibandakanyeka futhi ekuhlanganiseni kwe-cholesterol lipids, neurotransmitters, amahomoni e-steroid, kanye ne-hemoglo ...
I-Ascorbyl Palmitate (eyaziwa nangokuthi i-Vitamin C Ester) iwuhlobo olungenayo i-asidi ye-Vitamin C. Yenziwe nge-Ascorbic Acid (Vitamin C) kanye ne-Palmitic Acid (amafutha acid). I-Ascorbyl Palmitate iyi-antioxidant ephumelelayo: isiza ukulwa nama-radicals mahhala futhi ikhulise ukuhlanganiswa kwe-collagen.
I-Ascorbyl palmitate iwuhlobo lwe-ascorbic acid (uvithamini C) olutholakala ku-bioavailable kakhulu, futhi inazo zonke izici zomdabu oncibilikayo emanzini, okuwuvithamini C. Iyi-antioxidant enamandla ekuvikeleni i-lipids ku-peroxidation futhi iyi-radical yamahhala. umdondi.
I-Ascorbyl Tetraisopalmitate iphuma ku-Vitamin C encibilika kuwoyela engasetshenziswa ezindaweni eziphakeme ngaphandle kwezihibe, i-Ascorbyl Tetraisopalmitate ingenye yezinto eziphuma ezinzile ku-Vitamin C. Ngaphandle kwezinzuzo ezivamile ze-Vitamin C emsulwa, i-Ascorbyl Tetraisopalmiate ikhonjisiwe ukuthi iyanikezela. izinzuzo ezithile ezikhanyisa isikhumba.Ukuqhathanisa i-Ascorbic Acid ehlanzekile ye-Vitamin C, i-Ascorbyl Tetraisopalmitate ngeke ikhiphe noma isicasule isikhumba. Ibekezelelwa kahle ngisho nezinhlobo zesikhumba ezibucayi kakhulu. Futhi ngokungafani neVithamini C evamile, ingasetshenziswa ngemithamo ephezulu, futhi kuze kube yizinyanga eziyishumi nesishiyagalombili ngaphandle kwe-oxidizing.I-Ascorbyl Tetraisopalmitate yi-tetraester ye-Ascorbic Acid ne-Isopalmitic Acid. iwumkhiqizo ofakazelwe ngokomtholampilo, ozinzile, oncibilikayo kavithamini C ohlinzeka ngokumuncwa okuphezulu kwe-percutaneous futhi uguqule ngempumelelo kuvithamini c wamahhala esikhumbeni. lesi sithako esinemisebenzi eminingi sivimbela umsebenzi we-intracellular tyrosinase kanye ne-melanogenesis ukuze kukhanye, kunciphisa umonakalo we-uv-induced cell noma i-DNA, inikeza ukusebenza okunamandla okulwa ne-antioxidant, futhi kukhuphule ukuhlanganiswa kwe-collagen.
I-Ethyl Ascorbic Acid iyi-ejenti enhle kakhulu eyenza isikhumba sibe mhlophe, ivimbela ukusebenza kweTyrosinase ngokusebenza ku-Cu2+ futhi ivimbela ukwakheka kwe-melanin. ukuzinza okuhle kakhulu kuzo zonke izinhlobo zokwakheka kwezimonyo.
I-Ethyl Ascorbic Acid ingena esikhunjeni lapho igaywe khona ibe ascorbic acid.Ngenxa yale nqubo ukusebenza kwayo kugqame kakhulu kunaleyo ye-ascorbic acid emsulwa.Ayicasuli esikhumbeni nasemehlweni.
I-Ascorbyl glucoside iyinto engokwemvelo esebenzayo equkethe ukwakheka kwe-Vitamin C, kodwa izinzile. I-Ascorbyl glucoside ingavimbela ngempumelelo ukwakheka kwe-melanin, inciphise umbala wesikhumba, inciphise amabala obudala kanye ne-pigmentation yama-freckles. I-Ascorbyl glucoside nayo inendima yokukhanyisa isikhumba, isikhumba esilwa nokuguga, njll.
I-Magnesium Ascorbyl Phosphate iwuketshezi oluncibilika emanzini, olungacasuli, oluzinzile lwe-Vitamin C. Inamandla afanayo ne-vitamin C okuthuthukisa ukuhlanganiswa kwe-collagen yesikhumba kodwa iyasebenza ekugxilweni okuphansi kakhulu, futhi ingasetshenziswa ekugxilweni okuphansi njenge-10. % ukucindezela ukwakheka kwe-melanin (ekuxazululeni okumhlophe kwesikhumba). Kubalulekile futhi ukuqaphela ukuthi i-Magnesuim Ascorbyl Phosphate ingase ibe ukukhetha okungcono kune-Vitamin C kubantu abanesikhumba esizwelayo nalabo abafisa ukugwema noma yimiphi imiphumela yokukhipha ngoba amafomula amaningi kaVithamini C ane-acidic kakhulu (ngakho-ke akhiqiza imiphumela ekhiphayo).
I-sodium Ascorbyl Phosphate derivative of vitamin C, vitamin C isekelwe kwisayensi yesimanje kanye nobuchwepheshe bokucubungula izinto ezingavuthiwe ezenziwe kusetshenziswa lo mkhiqizo, kungakhathaliseki ukuthi ngomlomo noma zimuncwa esikhumbeni emzimbeni, zingagayeka ngokushesha nge-phosphatase ukuze zikhulule uvithamini C, uvithamini. I-C idlala imisebenzi eyingqayizivele ye-physiological and biochemical.I-Sodium Phosphate Vitamin C I-Vitamin C inakho konke ukusebenza kahle kwakho kokubili. I-Vitamin C iphinde inqobe ukuzwela ukukhanya, ukushisa nama-ion ensimbi, i-oxidized kalula ...
123456 Okulandelayo > >> Ikhasi 1/8